Iska caabinta Falastiiniyiinta waxay ku duqeysaa "Israel" boqolaal gantaal - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalIska caabinta Falastiiniyiinta waxay ku duqeysaa “Israel” boqolaal gantaal
May 12, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Qeybaha iska caabinta Falastiin ayaa ku dhawaaqay, fiidnimadii Talaadada, in qabsashada Israel ay bartilmaameedsatay boqolaal gantaal oo ka yimid Marinka Gaza.
“Guutooyinka Al-Qassam” wuxuu yiri, “Hadda, annagoo fulinayna ballanqaadkeenna, Guutooyinka Al-Qassam waxay billaabeen gantaal, kaasoo ah kii ugu weynaa ee ka dhaca Tel Aviv iyo hareeraheeda, iyagoo adeegsanaya 130 gantaal, iyagoo ka jawaabaya beegsiga cadowga ee shacabka. munaarado … oo waxaan ku leenahay cadawga: hadaad soo noqotid waan soo laabaneynaa.
Afhayeenka rasmiga ah ee Guddiyada iska caabinta Falastiin, Abu Mujahid, ayaa yiri, “iska caabintu waxay ka dhigi doontaa Tel Aviv nuqul ka mid ah Ashkelon, seefta Qudusna waxay ku goyn doontaa xiriirinta tuuladaada barakaysan.”
Al-Qassam wuxuu yiri, “Guutooyinka iska caabinta qaran waxay duqeeyeen deegaanka Israil ee Netivot laba gantaal.”
Deegaanka Ashkelon waxaa sidoo kale ku dhacay gantaal laga soo tuuray Marinka Gaza, marka lagu daro dhicitaankii mid ka mid ah gantaalada iska caabinta ee ka dhacay xaafada Holon ee u dhow Tel Aviv.
Dhankiisa, Guutada Abu Cali Mustafa waxay sheegeen , “Waxaan duqeyn ku qaadnay goobta militariga ee Sufa, oo bariga ka xigta Rafah, koonfurta marinka Gaza, gantaallo badan.”
Sawiro laga soo qaaday qabsashada Israel ayaa muujinayay daadgureynta tiro rakaab ah oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion, kadib markii gantaal ku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo laga soo bilaabay Gaza.
Bayaan ay soo saareen maamulka garoonka ayaa lagu sheegay in “dhammaan diyaaradaha la filayo inay yimaadaan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion lagu hagaajiyay dalalka Giriigga iyo Qubrus.”
Tan iyo Isniintii, qabsashada Israa’iil waxay duullaan gardarro ah oo isdaba joog ah ku qaadday Marinka Gaza oo ay ku hartay daraasiin shahiid ah iyo dhaawacyo rayid ah, marka lagu daro weerarada sii socda ee ay booliisku ku hayaan Masaajidka Al-Aqsa iyo cibaadada ku jirta, iyo qorshaha. inay ka kaxeeyaan Jerusalemites guryahooda oo ku yaal xaafada Sheikh Jarah ee Qudus la haysto
Mucaaradka oo cadaatay Xiriirka Gaarka ee Jabuuti Kala Dhaxaysa.